Ukuthintela njani iiBugs kwiYard yakho nakwindlu- Izinto ezili-13 ezinomtsalane kwii-Bugs - Indlela Yokuphila
Ukuthintela njani iiBugs kwiYard yakho nakwindlu- Izinto ezili-13 ezinomtsalane kwii-Bugs
Njengabantu, iincukuthu zifuna izinto ezintathu ukuze ziphile: Ukutya, amanzi kunye nendawo yokuhlala. Ukuba ujongene nezinambuzane ezingapheliyo, musa ukuthembela kwezona zilungileyo. 'Cinga njengebug,' utshilo uJohn Bell TruGreen . 'Zibonele ukuba laa mfo mncinci ufuna ukutya, ukusela nokuhlala phi.'
Ukurhola abangeneleli abangamkelekanga kwehla kwindlela edibeneyo. Ukusika uninzi lwezixhobo kangangoko kuya kwenza ukuba ikhaya lakho linganqweneli ukurhubuluza kwasekuqaleni, kuyeke ukubakho kosulelo ngaphambili baqala.
Isibhengezo-Qhubeka nokuFunda apha ngezantsiAmanzi amileyo Imifanekiso kaGetty
Ukuphelisa i-H20 emileyo - njengezitya zezilwanyana zasekhaya, amabhakethi kunye neebhafu zeentaka - ayisiyiyo kuphela inambuzane, kodwa ikwasika nakwizikrelemnqa. 'Nawaphi na amanzi amileyo angaphazanyiswanga ngaphezulu kweveki angayindawo enkulu yokuzala iingcongconi,' utshilo uDoug Webb, umphathi weenkonzo zobuchwephesha Ixesha . Ungalibali ukulahla iithoyi kunye nezityala nazo.
ipeyinti ethe tyaba ezindongeni
Imijelo evaliweyo Imifanekiso kaGetty
Emva kokukhupha okanye ukuphosa izitya eyadini yakho, ungalibali ukujonga uphahla. Iigatha ezixhaswayo zibonelela ngeengcongconi ngomnye umngxunya olula wokunkcenkceshela. 'Into abayifunayo sisiqingatha se-intshi ukuzala,' ulumkisa Umsasazi weTV kunye nesithethi seNational Pest Association Association uBob Vila .
Iindawo zenkunkuma Imifanekiso kaGetty
Isitshixo sokuphepha inkunkuma ethanda inkunkuma kukulawula ivumba. Ayibalulekanga nje ukuba 'ukhuphe inkunkuma' ngaphambi kokuba yakhe, kodwa qiniseka ukuba izitya zicocekile kwaye zomile, utshilo uWebb. Ukunciphisa konke ukuphuphuma okanye ukuchitheka okusikiweyo okwenziwe kulawo mavumba ahehayo.
Imfumba yamatye kunye namaTyholo Imifanekiso kaGetty
Kungakulungeleka, kodwa ukuqokelela iinkuni ngokuchasene nengaphandle kwekhaya lakho kukungahambi. Zombini iinkuni kunye nezityalo zinokwenza ibhulorho yokoqobo yeentubi kunye nabagxeki abafuna ukungena ngaphakathi, utshilo uBell. Gcina ubuncinci isithuba esizi-intshi ezi-6 phakathi kokuma kunye namahlamvu, kwaye ungagcini nto ngokuchasene neendonga.
IiGrill ezimdaka Imifanekiso kaGetty
Le barbecue yangasemva yayimnandi ngelixa yayihlala, kodwa ukutya okuhleliyo kwiigrates kuzakutsala iibhugi ixesha elide emva kokuphela kweqela, ngokukaBell. Enye impazamo yokupheka: Ukukhuphela isoda eseleyo eyadini. Iswekile pop itsala iimbovane ngokungafani nenye, uWebb ulumkisa.
Imbewu yeentaka kunye neBibble Imifanekiso kaGetty
Ukutya kwezilwanyana zasekhaya kutya ngaphezu kwezilwanyana zasekhaya. Ukugcina isitya sigcwele ngokungapheliyo kunokuyonwabisa inja yakho, kodwa sisidlo esilula sezinambuzane ezininzi (kunye noonomatse), utshilo uBell. Kuyafana nangembewu yeentaka, ngaphakathi nangaphandle.
Izibane zangaphandle Imifanekiso kaGetty
Ngelixa ungathenga ababulali be-elektroniki ezakwenza zap iingcongconi ezikufutshane, izibane azihlali zisebenza njengoko bekucwangcisiwe. 'Iindidi ezininzi zezinambuzane zitsaleleka kwizixhobo zokukhanya kwe-bug, kodwa ayizizo zonke ezizenza zibesemgibeni,' uWebb ulumkisa athi, 'okuthetha ukuba abantu bezinambuzane kule ndawo banokwanda.' Faka ukukhanya kwezokhuseleko kude nekhaya lakho, okanye ukhethe Iibhalbhu ezizodwa ezikhupha imitha enganiki mdla kangako .
Ukuphosa umnyango kuyatshayela Imifanekiso kaGetty
Ngelixa iimbovane namaphela zinokuxinana kwezona ndawo zincinci zibulelayo kwii-exoskeletons zazo, ukulungiswa okucwangcisiweyo okumbalwa kunokuba negalelo elikhulu. 'Apho ndibona eyona nkxalabo inkulu xa ndijonga indlu yabathengi ngokutshayela Utshilo uBell. Banotyekelo lokunikezela ngokuhamba kwexesha. Ukutshintsha irabha esezantsi kwamasango angaphandle kunokumisa iimbovane, amaphela kunye neekhilikithi kwiindlela zabo.
Izikrini ezikrazukileyo Imifanekiso kaGetty
Banokubonakala ngathi bancinci, kodwa bafumane ukulungiswa kwezikrini ngokukhawuleza. 'Imingxunya kwizikrini ivumela ukunyuka okuncinci kokuhamba komoya, okuvumela ukutya okanye elinye ivumba elinomtsalane ukuba lingene,' utshilo uWebb. 'Oku kunokunceda izinambuzane zifumane iinyembezi' kwikhaka lokhuselo 'lekhaya elibonakala ligcinwe kakuhle.'
Iintanda Imifanekiso kaGetty
Ukutywina yonke into ejikeleze ikhaya lakho akuyonyani (ngakumbi ukuba indala), kodwa ukufaka isicelo icaulk ecacileyo kwindawo yokungena ebonakalayo inokuvala indlela enkulu yembovane, u-Bell ucebisa. Uboya bentsimbi unokugcwalisa izithuba zodaka kwindawo encinci.
Iziqhamo ezigqithileyo Imifanekiso kaGetty
Hayi, awunyanzelekanga ukuba ugcine konke ukutya kwakho efrijini. Kuphantse kube nzima ukunqanda iziqhamo ukuba zingangeni ekhayeni lakho (ziya kwehla ngetshimini!) Kodwa ukuvelisa okudlulileyo kuya kukhupha igesi ye-ethylene, umazibuthe omkhulu we-bug. Yitya ezo bhanana ngaphambi kokuba zibe mdaka kwaye uyakulunga, utshilo uBell.
Iibhokisi zekhadibhodi Imifanekiso kaGetty
Nantsi inkuthazo oyifunayo ukuze ekugqibeleni ucime loo clutter. Iintubi ziya kuzonwabisa ngeglu ebopha iibhokisi zekhadibhodi, kwaye amaphela kunye nesilivere bayazithanda iimveliso zamaphepha. IWebb icebisa ukugcina iifayile eziyimfuneko kwi Iibhokisi ezilukhuni, zeplastikhi ezineziciko eziqinileyo endaweni yoko.
eyona nto intle yokuhombisa
Ukufuma okuphezulu Imifanekiso kaGetty
Ungalibali ukuhlasela i-H20 bugs ngokunjalo. I-silverfish okanye i-springtail infestation ihlala ibonisa ukuba unendawo evuzayo yamanzi, okanye ukuba ikhaya lakho lifuna a isixhobo sokukhupha izixhobo . 'Ukulungisa ezo ngxaki zibangela ukubonakaliswa kwezinambuzane kuya kusebenza ngcono kunokuthenga itoti yezibulali zinambuzane kunye nokutshiza, utshilo uBell.
UCaroline Picard Umhleli wezeMpilo UCaroline nguMhleli wezeMpilo kuGoodHousekeeping.com egubungela isondlo, impilo, impilo kunye nezinye iindaba zokuphila.Lo mxholo wenziwe kwaye ugcinwe ngumntu wesithathu, kwaye ungeniswe kweli phepha ukunceda abasebenzisi ukubonelela ngeedilesi zabo ze-imeyile. Unokwazi ukufumana ulwazi oluthe kratya malunga noku kunye nomxholo ofanayo kwipiyano.io Intengiso-Qhubeka nokuFunda apha ngezantsi
Igorge george ekhaya echibi como
iintsingiselo zokwakha amakhaya 2017
iintsingiselo zekhabhathi zasekhitshini
izipho ezenzelwe wena zoomama abatsha